xisbiga Kulmiye oo dhawaan la filayo in loo tartamo | Somalisan.com Home
xisbiga Kulmiye oo dhawaan la filayo in loo tartamo
2/21/2013 4:23:00 P
Dadkaasi oo ay ugu tun weynaayeen ka sakow muusi biixi, cabdi casiis samaale iyo maxamed Kaahin.
Waxa maalmahan hadal hayteedu suuqa ku jirtay khilaafka ka dhashay loolanka loogu jiro guddoomiye nimada xisbiga Kulmiye oo la finayo in dhawaan shirweyne lagu soo doorto.
Khilaafkaasi oo ifka u soo baxay ka dib markii ay isa sharaxeen dad badan oo hunguri kaga jiro in ay jagada gudoomiyenimada xisbul xaakimka kulmiye qabtaan.
Waxa iyana jirtay in guddoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye xildhibaan waabeeye iyo gudoomiyaha golaha dhexe Jaamac shabeel ay ka sanqadhiyeen in madaxweyne siilaanyo isu taagayo jagada murashaxa xisbiga.
Arintaasi oo diirka ka qaaday in muuse laga tukhaantukhiyo hogaanka ku meel gaadhka ah ee madaxweyne siilaanyo ku wareejiyay maamlihii uu la muqlaysnaa guusha uu ka soo hooyay doorashadii 2010 dalka ka dhacday.
Hadaba waxa iyagu si cad arintan uga hadlay suldaanka guud ee beelaha Somaliland suldaan maxamed suldaan cabdi qaadir iyo beeldaajiye xaaji cabdi waraabe oo is barbartaagay muuse biixi sheegayna in uu muuse biixi looga tanaasulo jagada gudoomiye ee xisbiga oo hore loogu wareejiyay.
Waxaanu muuse biixi ku diirsaday hiilka hagar la’aanta ah ee uu ka helay abtiyaashii Hadaba arintani ayaa waxa ay i xasuusisay maalmihii xisbiga UCID laysku qabsaday ee la doonay in xisbiga laga fara maroojiyo Faysal cali waraabe.
Faysal maalintaa waxa garab istaagay reer tolkii balse abtiyaashii wax hiil ah may siin.
Hadaba akhrise miyaanay cadeen in muuse biixi ka abtiyaal wanaagsanyahay faysal cali waraabe.
Warsame Siyaad Nuur